Inona no ho hitantsika amin'ny hetsika Apple amin'ny 9 septambra | Vaovao IPhone
Apple dia nanambara ny hetsika tamin'ny 9 septambra vitsy lasa izay, ary noho ny tsaho be dia be niseho tato anatin'ny andro vitsivitsy (sy herinandro) dia fehezanteny lehibe iray no voaresaka miaraka amina vaovao marobe araka izay mahaliana. IPad Pro, iPad Mini 4 vaovao, iPhone 6s sy 6s Plus vaovao, iPhone 6c vaovao? Ny Apple TV miaraka amin'ireo fiasa sy fiasa vaovao, vaovao ao amin'ny iOS 9, OS X El Capitan ary watchOS 2 ary iza no mahalala raha misy bebe kokoa tsy nampoizina fa tsy nahavita namonjy ny antsipiriany i Apple hatreto. Inona no ho hitantsika amin'ny hetsika Alarobia? Eto izahay dia mamintina azy amin'ny antsipiriany rehetra izay efa tafaporitsaka hatreto.
1 iPhone 6s sy 6s Plus.
3 Apple TV vaovao
iPhone 6s sy 6s Plus.
Tsy isalasalana fa izy ireo no ho mpiorina amin'ny fampisehoana an'i Apple satria io no havoakan'ny orinasa hatreto, saingy tsy fanavaozana tena revolisionera izany, farafaharatsiny priori. Apple dia hampiseho ireo iPhones vaovao vita amin'ny firaka aliminioma vaovao, Mitovy amin'ilay ampiasaina ao amin'ny Apple Watch Sport, ary ho maharitra kokoa izany. Izy ireo koa dia hohamafisina amin'ny teboka malemy indrindra amin'ny casing vy mba hialana amin'ny olana toy ny "bendgate" malaza. Misy loko mavokely vaovao mety ho tonga ihany koa hanomezana antsika famaranana efatra samihafa: volondavenona mainty, fotsy-volafotsy, fotsy-volamena ary fotsy-mavokely.
Ny fakan-tsary dia hisy fanavaozana lehibe, na ny aoriana na ny eo aloha. Avy any aoriana no hananantsika fakan-tsary 12MP afaka mandray horonantsary 4K. Saingy ny fanovana lehibe indrindra dia mety ho tonga amin'ny fakan-tsary FaceTime, izay manomboka amin'ny 1,2 Mpx ka hatramin'ny 5 Mpx ankehitriny, misy koa fiasa vaovao manan-danja: panorama sy sary mihetsika miadana, ary na dia "flash" iray hikarakarana ny efijery terminal aza. , mba haka sary tsara kokoa amin'ny toe-javatra maivana.
Ny teknolojia Force Touch izay ampidirin'ny Apple Watch vaovao sy ny MacBook dia hahatratra ny iPhone, izay afaka hamaritra tsy roa ihany, fa ambaratonga telo amin'ny tsindry: paompy tsotra, tsindry mahazatra ary tsindry matanjaka kokoa. Izany dia hanome ny fahafaha-maneho menus konteksto samihafa arakaraka ny fikitika ny efijery na koa ny fanatanterahana asa samy hafa mivantana miankina amin'ny haavon'ny tsindry mihatra. Ny fahafaha-mandrindra ny sary mihetsika animated dia hamita ny fiovan'ny iPhones vaovao izay toa hanohy hitazona ny teknolojia LCD izy ireo, na dia tsy voahilika tanteraka aza fa afaka miova ho OLED. Mikasika ny vidin'ny terminal dia toa tsy miova izy ireo tamin'ny taon-dasa, ary koa ny fahaiza-manao isan-karazany.
Toa voamarina ho an'ny takelaka Apple vaovao ny anaran'i iPad Pro. Miaraka amin'ny haben'ny 12,9 santimetatra sy ny fatrany 2732 × 2048. Ny endriny dia hitovy amin'ny an'ny iPad Air 2 ka ho iPad lehibe izy amin'ny lafiny ivelany. Hampiditra stilosy amin'ny boaty iray ihany izy izay miaraka amin'ny efijery Force Touch, mitovy amin'ny an'ny iPhones vaovao, dia hanome ny iPad fiasa vaovao izay hahatonga azy io ho fitaovana mamokatra be kokoa, na farafaharatsiny izay no tanjon'ny Paoma. Izy io koa dia hamela ny fividianana ny stylus tsy miankina amin'ny iPad, noho izany dia mety hifanaraka amin'ny maodely mahazatra ihany koa na dia vitsy aza ny asany.
Apple dia hanolotra kojakoja mahazatra ho an'ny iPad Pro, toy ny Smart Case sy ny Smart Cover, miaraka amin'ny vidiny somary avo kokoa noho ny tranga sy ny fonony maodelin'ny iPads hafa, saingy misy fiasa mitovy aminy. Ho fanampin'izay, manana keyboard koa natao manokana ho an'ny iPad izy., ary momba izay kely fotsiny no fantatsika.
Mpandahateny efatra nozaraina teo an-tampon'ny sy farany an'ny iPad Pro ary ny fifandraisana Lightning dia mameno ny antsipirihany an'ity fitaovana ity, izay tsy hainay raha hitondra processeur A9, A9X na iray natao ho azy manokana, ary raha hampitaovana RAM 2GB toa ny iPad Air 2 i Apple na hanampy vola bebe kokoa aza.
Tsy ho eo noho eo ny fisian'ny iPad Pro, fa hiandry ny volana Oktobra vao hanao famandrihana mialoha sy hatramin'ny volana novambra hividianana ilay fitaovana. Toa tadiavin'i Apple ny iPad Pro hameno ny tsena amin'ireo fampiharana fampiharana lehibe ampifanarahana amin'ny efijery sy ireo fiasa vaovao, ary hanomboka alohan'ny vanim-potoanan'ny Krismasy miaraka amin'ireo singa ampy hamaly ny fangatahana mafy andrasana.
Apple TV vaovao
Ny Apple TV vaovao dia mety ho "fonony" lehibe amin'ilay hetsika. Miaraka amina endrika mitovy amin'ny an'ny ankehitriny fa matevina kokoa, Ny fitaovana vaovaon'i Apple no ho fanavaozana voalohany ny Apple TV hatramin'ny 2012. Ny fifandraisana dia hitovy amin'ny an'ny ankehitriny, ary azo inoana fa hanavao ny fifandraisana WiFi izy ireo mba hifanaraka amin'ny fifandraisana 802.11ac.
Ny fiovana lehibe dia ho tonga amin'ny fifehezana anao, izay ho lehibe kokoa sy mainty, cmiaraka amin'ny touchpad hahafahanao mivezivezy mora kokoa amin'ny alàlan'ny menus, ny sensor sensors mba hifehezana ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny rafitra sy lalao video, fanaraha-maso ny volume, mikrô sy bateria hialana amin'ny famerenana indray. Ho fanampin'ity fifehezana ity dia azonao atao ny mampiasa fifehezana Bluetooth hafa mifanentana toy ireo efa misy ho an'ny iPhone sy iPad.
Ny rafitra fiasa dia hitovy amin'ny iOS 9, na dia misy estetika izay hampatsiahy anao ny efijery an-trano Apple TV ankehitriny. Hampiditra an'i Siri sy ny rafi-pikarohana maranitra ao amin'ny iOS 9 izy io, izay ahafahan'ny fikarohana sy ny valiny hanomezana anay rohy mivantana amin'ireo rindranasa samihafa toa ny Netflix, Hulu, iTunes na serivisy hafa napetrakay. Siri no ho mpiorina voalohany amin'ity Apple TV ity, ary te ho tonga ivon'ny tranonay mifandray. Ity Apple TV vaovao ity dia hanana App Store, amin'izay afaka mametraka rindrambaiko sy lalao eo aminy isika.
Ny Apple TV vaovao dia hanana vidiny tena mahaliana: $ 149 ho an'ny maodely 8GB ary $ 199 ho an'ny maodely 16GB. Misy ny fahafahan'ny Apple hamoaka ny maodely 16GB ihany, ary amin'izany dia hisafidy ny $ 149 ho vidiny farany izy. Ny maodely Apple TV amin'izao fotoana izao dia manana fitehirizana 8GB, noho izany raha dinihina fa ity maodely vaovao ity dia hamela ny fametrahana ny rindranasa sy ny lalao, toa tsy mitombina amin'ny safidin'i Apple ny hisafidianana an'io safidy fitehirizana io.
Ilay takelaka Apple kely dia hanana ny fanavaozana azy efa ela niandrasana farany, na tara aza herintaona. Amin'ny ankapobeny dia iPad Air 2 izy io fa ao anatin'ny iPad Mini, noho izany dia hizara processeur, RAM ary koa manana fiasa mitovy amin'ny iPad Air 2 ao amin'ny iOS 9, ao anatin'izany ny tena multitasking eo amin'ny efijery.
Apple dia afaka mampiseho maodely vaovao an'ny Apple Watch, saingy tsy ho tonga izy ireo aorian'izay, misy aza ny resaka 2016. Modely volamena mora kokoa sy loko vaovao ho an'ny maodely ara-panatanjahantena, amin'ny volamena sy mavokely mamita ny elanelana hampitoviana azy amin'ny iPhone 6s ary ny 6s Plus dia mety ho ny vaovao azontsika amin'ny taona ho avy. Ny zavatra azo antoka fa hananantsika eo noho eo dia ny fehin-kibo fanatanjahan-tena vaovao amin'ny loko miloko kokoa, ao anatin'izany ny PRODUCT (RED) mena.
watchOS 2 no ho endriny vaovao amin'ny rafitra fiasa Apple Watch miaraka amin'ny fahafaha-mamolavola fampiharana farany izay azo apetraka mivantana amin'ny fiambenana, ka hanatsarana ny fotoana famerana sy hanitarana ny asany. Ny maody "Nightstand" vaovao sy ny kaody manokatra izay manakana ny olona tsy hihetsika ny famantaranandro tsy misy ny teny miafinao dia fiasa vaovao hafa amin'ity rafitra fiasa ity izay ho hita aorian'ny hetsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Izay ho hitantsika amin'ny hetsika Apple amin'ny 9 septambra